Gabay: Go�aan Qaran
Gabayga halkan ka dhegeyso.......
Gabaygaan la magacbaxay Go�aan qaran waxaa ciriyay Inj. Maxamed Cali Cibaar, wuxuuna soo baxay 1dii May 2007. Gabaygu wuxuu jawaab u yahay gabaygii uu curiyay suugaanyahanka Maxamed Xirsi Guuleed ( Abdibashir) oo magaciisu ahaa Gobonnimo dagaallama isdhiib waa gunnimo weyne, gabaygaas oo si qotodheer uga hadlayay gumaadka iyo gardarrada lagu hayo shacabka aan waxba galabsan ee magaalada Muqdisho oo ay xasuuq u geysteen cadowyo isku soo bahaystay oo kala ujeeddo ahi.
Waa kan gabaygii Go'aan qaran ee akhris wanaagsan. ama halkan ka dhegeyso.......
Geesi waa ku diirsaday dullina waa gamuun helaye
Saqiirrada la wada gowracee haaddu guraneyso
Walaalow haddey gogosha iyo gama�i kuu diidday
Qaar baa hooyooyinka gablami ganacsigood yahaye
Allahayow na guulee waqtigu waa is gurayaaye
Gaar baa intaa laga hayoo wey gabbanayeene
Oo wadajir wuxuu gooyo aan maanta garanweynay
In dugaaggu hilibkeen gurtaa wow garleeyahaye
Gefkii dhacay waxbaa laga bartiyo gama�asanaantiiye
Gabiley Hargeysiyo Burciyo buurta Shiikh gurada
Garoowiyo Nugaal Gaalkacyo Galdogobtaa hoose
Galgaduud ka gees iyo ka gees meel kastoo aad gaaro
Guudka Buur gudaha Baydhabiyo gurisankii Waajid
Googaaleysan maynee dhabtii weysla garannaaye
Dhaaxey gabgable khaa�iniyo noo shireen gumiye
Dhaxey Afrika gaabsatoy afka gufeeyeene
Dhaaxey go�aan nagu khaldeen ay na geliyeene
Dhaaxey mid gambo caabudiyo gaabis koriyeene
Dhaaxey geddii ay rabeen naga gujeysteene
Mar haddii gabdhihii sharafta laa tacaddi loo geystay
War yaa goboo xumaan ka gilgishey galabta joogtaaye
Inaan diinta u gargaarno yay galabta joogtaaye
Gaalleef in lala soo saxey galabta joogtaaye
Guba guba Woyaanaha gubey galabta joogtaaye
Waa garashadiinniyo hunguri aad ku go�eysaane
Gam haddaan dhaheynoo dhamaan geeri mudaneyono
Gayigeenna inaan daafacnaa waa go�aan qarane
Gardarrada inaad eedeysaan waa go�aan qarane
Illaa Maqalle aan ku gaardinnoo kibirku uu gaabto
Gu� barwaaqo illaa uu curtoo galalka noo buuxsha
Geeddiga xornimo inaan wadnaa waa go�aan qarane
Waxaad tahay Goroyo waalatoo gabbal u sii dumaye
Ganaaxa iyo adigaa dalbaday dhiigga gobo�leyne
Galbataye maxaan kuu galnaa weys gunaannadiye?
Goror heensataa iyo bukaan go�a ka boobtaaba
Galbataye maxaan kuu galnaa weys gunaanadiye?
Waxa aan gadaal maagannahay yaadan garaneyne
Wixii falcelis ah ku soo hagaaji : Soomaali60@yahoo.com